Wakiilada Safarka Hindiya iyo Guddiga Dalxiiska ee Nepal Hadda Gacmaha ku biira
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Wakiilada Safarka Hindiya iyo Guddiga Dalxiiska ee Nepal Hadda Gacmaha ku biira
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Wararka Nepal • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Hindiya iyo Nepal ayaa isku biiray
Ururka Wakiilada Safarka ee Hindiya (TAAI) ayaa saxeexay Memorandum of Understated (MOU) Oktoobar 22, 2021, oo ay la leeyihiin Guddiga Dalxiiska Nepal si kor loogu qaado loona wanaajiyo dalxiiska laba geesoodka ah.
MOU waxa ay diiradda saartaa horumarinta danaha labada dhinac iyo dalxiisayaasha imanaya iyada oo loo marayo iskaashi iyo hab iskaashi oo ku salaysan is-dhaafsi.
Jyoti Mayal, Madaxweynaha, TAAI, ayaa sheegay in ay diiradda saarayaan horumarinta wax soo saarka dalxiiska kaas oo ay ku jiraan kaalmo laba geesood ah ee kor u qaadida dalxiiska.
Tan waxaa lagu gaari doonaa munaasabado, bandhigyo waddooyin ah, kulanno, shirar, webinars, iwm, si loo muujiyo awoodda dalxiiska ee labada dal.
Jyoti Mayal waxay soo gudbisay oo go'aansatay in India iyo Nepal wadaagaan xuduudaha, sidaas darteed, labada waddan waa in ay horumariyaan dalxiiska badan, gaar ahaan ka dib aafada. Labadaba waxaa looga baahan yahay inay noqdaan kuwo istaraatiijiyad badan leh oo ay qaataan hab-dhaqameedyo cusub iyo xeelado suuqgeyneed. Dalxiiska labada dal waxa uu arki karaa koboc la taaban karo oo aakhirka noqon kara suuqa koowaad ee isha.
Anoop Kanuga, Xubinta Maamulka, TAAI, waxa uu mahadnaqay una mahad celiyay Dr. Dhananjay Regmi, CEO, Nepal Tourism Board (NTB), iyo dhamaan kooxdeeda taageerada iyo iskaashiga ay u fidisay TAAI. Waxa uu iftiimiyay xidhiidhka da'da weyn ee India iyo Nepal labadaba iyo sida TAAI ay uga qayb qaadatay sii xoojinta iyo xoojinta isku midka ah iyada oo fududaynaysa safarka iyo ganacsiga labada quruumood.
Dhacdooyin gaar ah ayaa laga yaabaa in lagu daro MOU-da, labada dhinacna iyadoo lagu salaynayo doodaha iyo falanqaynta waxay dejin doonaan xeelado lagu horumarinayo laguna kobcinayo dalxiiska laba geesoodka ah, ayuu yiri Jay Bhatia, Madaxweyne ku xigeenka.
Bettaiah Lokesh, Xoghayaha Guud ee Sharafta leh, ayaa ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo fududaynta martiqaadyada isdhaafsiga ah ee midba midka kale xafladaha sannadlaha ah ee ay ka mid yihiin shirarka, safarada safarka, iyo dhacdooyinka kale ee heer qaran iyo heer gobol, waxayna u mahadcelisay NTB inay ogolaatay in talada lagu daro MOU.
Xog-isweydaarsiga, kaas oo door muhiim ah ka ciyaara horumarinta dalxiiska horumarinta istaraatiijiyado la xiriira horumarinta kaabayaasha, falanqaynta, iyo xogta kale, iwm, runtii waa qodob gaar ah oo lagu daray MOU ayuu yiri Shreeram Patel, Khasnajiga Sharafta.